လငျမယား ခဈြတငျးနှောတဲ့အခါ အပေးအယူ မြှစဖေို့ – Alanzayar
လငျမယား ခဈြတငျးနှောတဲ့အခါ အပေးအယူ မြှစဖေို့
အပေးအယူ တညျ့စမေယျ့ နညျးလမျးလေးတှေ သုံးကွညျ့နျော
လငျရယျ မယားရယျလို့ ဖွဈလာပွီဆိုရငျ စုံတှဲလေးတို့မှာ ခဈြတငျးနှောတဲ့ ကိစ်စက ရှိလာမှာပါ။ အိမျထောငျရေး သာယာဖို့ဆိုတာ လိငျမှုကိစ်စ အဆငျပွနေဖေို့လညျး လိုပါတယျ။ လငျနဲ့မယား နှဈကိုယျကွားကိစ်စတှေ အဆငျပွနေမှေ ကနျြတဲ့ စီးပှားရေးနဲ့ လူမူရေးကိစ်စတှမှော အဆငျပွနေိုငျမှာပါ။ ဒီတော့ အဆငျပွခွေငျးရဲ့ အစဖွဈတဲ့ ခဈြတငျးနှောတဲ့နရောမှာ နှဈယောကျသား အပေးအယူ မြှစဖေို့ ဘာတှေ လုပျဆောငျလို့ရမလဲဆိုတာ ဖျောပွလိုကျပါတယျ။
အိမျထောငျရေးမှာ ဆကျဆံခငျြတဲ့အခြိနျမှာ အခြိနျ၊ရကျတှေ ရှိသလို မဆကျဆံခငျြတဲ့ အခြိနျတှေ၊နရေ့ကျတှလေညျး ရှိပါတယျ။ အိမျထောငျဘကျက အလုပျကိစ်စနဲ့တခွားစိတျဖိစီးမှုတှေ ရှိနရေငျ လိငျဆကျဆံခငျြစိတျ လြှော့နညျးတတျပါတယျ။ ဒီလိုမြိုး အိမျထောငျဘကျက စိတျမပါတဲ့အခြိနျမှာ အတငျးအကွပျ ဆကျဆံဖို့ မတောငျးဆိုတာက ပိုပွီး စိတျပြျောရှငျစနေိုငျသလို မြှတတဲ့ အပေးအယူ ဖွဈမှာပါ။
အသဈအဆနျးတှေ စဉျးစားပါ နှဈယောကျစလုံး ဆကျဆံဖွဈမယျ့ အခြိနျကို ညှိပါ
အိမျထောငျရေးမှာ လိင်မှုကိစ္စတွေ အဆငျပွစေဖေို့ဆိုရငျ တဈယောကျနဲ့ တဈယောကျ ညှိနှိုငျးထားဖို့ လိုပါတယျနျော။ တယောကျက အပွငျအမွဲတမျးထှကျနတော၊ ခရီးတှေ တောကျလြှောကျထှကျနတောတှကေ ခဈြတငျးနှောတာကို ထိခိုကျစနေိုငျပါတယျ။ ဒါကွောငျ့ ဆကျဆံမယျ့ အခြိနျကို နှဈဦးစလုံး အဆငျပွအေောငျ ညှိပါ။
နှဈယောကျစလုံး ဆကျဆံဖွဈမယျ့ အခြိနျကို ညှိပါ ပြျောစရာကောငျးတဲ့ ဆကျဆံခွငျး ဖွဈပါစေ
နှဈယောကျစလုံး ဆကျဆံတဲ့အခြိနျမှာ ပြျောစရာကောငျးဖို့ လိုပါတယျ။ တဈယောကျ ဖွဈခငျြတဲ့ စိတျဆန်ဒကို လိုကျလြောပေးဖို့ လိုသလို ဒီလိုအခြိနျမြိုးမှာ စိတျညဈရမယျ့ ရနျဖွဈရမယျ့ ကိစ်စတှေ မပွောဖို့ လိုပါတယျ။ ပြျောစရာကောငျးတဲ့ ဆကျဆံမှုရဖို့အတှကျ တဈယောကျနဲ့ တဈယောကျ ကွညျကွညျနူးနူးလေး ပွောပေးပါ။
စုံတှဲလေးတို့ရေ လငျနဲ့မယားရယျလို့ ဖွဈလာရငျ သူ့အသားဟာ ကိုယျ့အသားလို ဖွဈတော့ တခါတလမှော အတှအေ့ထိတှဟော ရိုးရှငျးနတေယျလို့ ခံစားရတတျပါတယျ။ လူဆိုတာ အသဈအဆနျးတှကေို ကွိုကျနှဈတာပဲမို့ ကိုယျ့အိမျထောငျဘကျနဲ့ ထိတှတေဲ့အခါမှာ အသဈအဆနျးလေးတှေ ဖွဈအောငျ ဖနျတီးပေးပါ။ ဒါဆိုရငျ အပေးအယူတညျ့ပွီး ပြျောစရာကောငျးတဲ့ လိငျဆကျဆံရေးလညျး ရရှိမှာပါ။
စုံတှဲလေးတို့ရေ လိငျဆကျဆံခငျြစိတျကလညျး တဈခါတလမှော လြော့နညျးတတျတာမို့ အခု Marry က ပွောပွတဲ့ အပေးအယူ တညျ့စမေယျ့ နညျးလမျးလေးတှေ သုံးကွညျ့နျော။ crd
လင်မယား ချစ်တင်းနှောတဲ့အခါ အပေးအယူ မျှစေဖို့
အပေးအယူ တည့်စေမယ့် နည်းလမ်းလေးတွေ သုံးကြည့်နော်
လင်ရယ် မယားရယ်လို့ ဖြစ်လာပြီဆိုရင် စုံတွဲလေးတို့မှာ ချစ်တင်းနှောတဲ့ ကိစ္စက ရှိလာမှာပါ။ အိမ်ထောင်ရေး သာယာဖို့ဆိုတာ လိင်မှုကိစ္စ အဆင်ပြေနေဖို့လည်း လိုပါတယ်။ လင်နဲ့မယား နှစ်ကိုယ်ကြားကိစ္စတွေ အဆင်ပြေနေမှ ကျန်တဲ့ စီးပွားရေးနဲ့ လူမူရေးကိစ္စတွေမှာ အဆင်ပြေနိုင်မှာပါ။ ဒီတော့ အဆင်ပြေခြင်းရဲ့ အစဖြစ်တဲ့ ချစ်တင်းနှောတဲ့နေရာမှာ နှစ်ယောက်သား အပေးအယူ မျှစေဖို့ ဘာတွေ လုပ်ဆောင်လို့ရမလဲဆိုတာ ဖော်ပြလိုက်ပါတယ်။
အိမ်ထောင်ရေးမှာ ဆက်ဆံချင်တဲ့အချိန်မှာ အချိန်၊ရက်တွေ ရှိသလို မဆက်ဆံချင်တဲ့ အချိန်တွေ၊နေ့ရက်တွေလည်း ရှိပါတယ်။ အိမ်ထောင်ဘက်က အလုပ်ကိစ္စနဲ့တခြားစိတ်ဖိစီးမှုတွေ ရှိနေရင် လိင်ဆက်ဆံချင်စိတ် လျှော့နည်းတတ်ပါတယ်။ ဒီလိုမျိုး အိမ်ထောင်ဘက်က စိတ်မပါတဲ့အချိန်မှာ အတင်းအကြပ် ဆက်ဆံဖို့ မတောင်းဆိုတာက ပိုပြီး စိတ်ပျော်ရွှင်စေနိုင်သလို မျှတတဲ့ အပေးအယူ ဖြစ်မှာပါ။
အသစ်အဆန်းတွေ စဉ်းစားပါ နှစ်ယောက်စလုံး ဆက်ဆံဖြစ်မယ့် အချိန်ကို ညှိပါ
အိမ်ထောင်ရေးမှာ လိင္မှုကိစ္စေတြ အဆင်ပြေစေဖို့ဆိုရင် တစ်ယောက်နဲ့ တစ်ယောက် ညှိနှိုင်းထားဖို့ လိုပါတယ်နော်။ တယောက်က အပြင်အမြဲတမ်းထွက်နေတာ၊ ခရီးတွေ တောက်လျှောက်ထွက်နေတာတွေက ချစ်တင်းနှောတာကို ထိခိုက်စေနိုင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ဆက်ဆံမယ့် အချိန်ကို နှစ်ဦးစလုံး အဆင်ပြေအောင် ညှိပါ။
နှစ်ယောက်စလုံး ဆက်ဆံဖြစ်မယ့် အချိန်ကို ညှိပါ ပျော်စရာကောင်းတဲ့ ဆက်ဆံခြင်း ဖြစ်ပါစေ
နှစ်ယောက်စလုံး ဆက်ဆံတဲ့အချိန်မှာ ပျော်စရာကောင်းဖို့ လိုပါတယ်။ တစ်ယောက် ဖြစ်ချင်တဲ့ စိတ်ဆန္ဒကို လိုက်လျောပေးဖို့ လိုသလို ဒီလိုအချိန်မျိုးမှာ စိတ်ညစ်ရမယ့် ရန်ဖြစ်ရမယ့် ကိစ္စတွေ မပြောဖို့ လိုပါတယ်။ ပျော်စရာကောင်းတဲ့ ဆက်ဆံမှုရဖို့အတွက် တစ်ယောက်နဲ့ တစ်ယောက် ကြည်ကြည်နူးနူးလေး ပြောပေးပါ။
စုံတွဲလေးတို့ရေ လင်နဲ့မယားရယ်လို့ ဖြစ်လာရင် သူ့အသားဟာ ကိုယ့်အသားလို ဖြစ်တော့ တခါတလေမှာ အတွေ့အထိတွေဟာ ရိုးရှင်းနေတယ်လို့ ခံစားရတတ်ပါတယ်။ လူဆိုတာ အသစ်အဆန်းတွေကို ကြိုက်နှစ်တာပဲမို့ ကိုယ့်အိမ်ထောင်ဘက်နဲ့ ထိတွေ့တဲ့အခါမှာ အသစ်အဆန်းလေးတွေ ဖြစ်အောင် ဖန်တီးပေးပါ။ ဒါဆိုရင် အပေးအယူတည့်ပြီး ပျော်စရာကောင်းတဲ့ လိင်ဆက်ဆံရေးလည်း ရရှိမှာပါ။
စုံတွဲလေးတို့ရေ လိင်ဆက်ဆံချင်စိတ်ကလည်း တစ်ခါတလေမှာ လျော့နည်းတတ်တာမို့ အခု Marry က ပြောပြတဲ့ အပေးအယူ တည့်စေမယ့် နည်းလမ်းလေးတွေ သုံးကြည့်နော်။ crd
ဟွန်ဆင်ကို ဖိနပ်ဖြင့်ပေါက်တဲ့ ရွှေဖိနပ်ပိုင်ရှင် သိရပြီ
NUG ကတိတည်ရန် ဗိုလ်နဂါးအဖွဲ့၏ တောင်းဆိုချက်များ တင်သမျှအဖြုတ်ချခံနေရ
အာဆီယံနဲ့ NUG အစိုးရ တွေ့ဆုံဖို့ အဆိုပြုချက်ကို ကန့်ကွက်ပယ်ချတယ်ဆိုပြီး နိုင်ငံခြားရေး ထုတ်ပြန်
Previous Article လေတပ်ဗိုလ်ကြီးပြည့်ဖြိုးကျော်အိမ်ဗုံးကြဲခံရ..a
Next Article ဒလန် တယောက်ရဲ့ ယုတ်မာမှုများ
ယောကျာ်းတွေကမကောင်းဘူးနော်ဆိုပြီး ပရိသတ်တွေကိုသတိပေးလိုက်တဲ့ ယွန်းယွန်း
ကာဗာခင်ဇော်ကို အဲလက်စ်တောင်ကြမ်းပြီ see more….
မော်လမြိုင် Ocean ထဲက Escort ဆိုင် ဂျုပ်ခံလိုက်ရပြီ see more….
မက်လုံးပေးပြီး ပိတ်ခံလိုက်ရပြီ see more….